गर्भवती महिलाले यौनसम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुदैन् ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०८, २०७६ समय: १६:०१:५३
यौन सम्पर्क भन्ने कुरा प्राकृतिक कुरा हो, त्यस्तै गर्भावती हुनु पनि प्राकृतिक कुरा हो, त्यसैले यि दुईकुरा नै प्राकृतिक कुरा भएकोले दुबैलाई सँगै मिलाएर लान सकिन्छ । लगातार यौन सम्पर्क गरीरहँदा जब महिनावारी बन्द हुन्छ र त्यसपछि १०र१५ दिन पछाडि चेकअप गराउँदा गर्भ रहेको जानकारी पाइन्छ । लगातार यौनसम्पर्क गर्दा गर्भपतन हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यसैले यि दुईकुरा नै प्राकृतिक भएकाले गर्भ अवस्थामा यौनसम्पर्क गर्दा असर गर्ने, नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन । गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क गर्दा के बुझ्नु पर्यो भने गर्भवती महिलालाई अप्ठ्यारो, असहजीलो हुनु भएन । त्यसैले जुन आसनमा यौन सम्पर्क गर्दा महिलालाई सहज हुन्छ त्यहि आसनमा यौनसम्पर्क गर्नुभयो भने महिला, बच्चा कसैलाई पनि असर हुँदैन ।
गर्भावस्थामा महिलाको मनमा प्रेमका भावहरु बढि आउने हुँनाले त्यो कुरालाई यौन जोडिले ख्याल राख्नु गरुरी हुन्छ । गर्भावस्थामा यौनसम्पर्क गर्दा ब्लिडिङ हुन्छ र ? ब्लिडिङहुने कारण भनेको गर्भरहेको बेलामा कुनै पनि बेलामा हुने कुरा हो । यो गर्भावस्थाको सबैभन्दा जोखिम पुर्ण अवस्था हो । यदि पटक पटक ब्लिडिङ हुने, गर्भपटन हुने महिलाहरुले यौन सम्पर्कमा केहि ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ तर यौन सम्पर्क गरेकै कारण ब्लिडिङ हुने भन्नेहुँदैन ।